35 saamaynta qoraalka CSS ee websaydhkaaga mawduuc kasta | Abuurista khadka tooska ah
Waxaan horeyba u daabacnay dhowr toddobaad kahor taxane ah saamaynta qoraalka CSS ee loogu talagalay hagaajinta soo bandhigida cinwaanka H2 alaabta ama cinwaanka gelitaanka adeegga ee lagu iibiyo websaydhka macaamiisha. Saameynta qoraalka CSS ee awood u leh inay siiso bartaas tayada ah ee aan raadineyno inaan ku qancino macaamilka oo nagu sii hayno faylalka muddo dheer.
Waxaan ku laabaneynaa liis kale oo weyn oo ah saameynta qoraalka CSS ee sida gaarka ah loogu talagalay in lagu soo bandhigo degel sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah. alaabta, adeegga, bogga soo degitaanka ama nooc kale oo mawduuc ah. 35 saamayn qoraal ah oo aadan seegi karin si aad u muujiso in naqshadeynta websaydhku maanta ay marayso heerkii ugu wanaagsanaa iyo inaannaan seegi karin tareenka si aan ula socono bilicsanaanta hadda jirta.
1 Saamaynta qoraalka aamusnaanta filimka
2 Kordhinta gelitaanka qoraalka CSS
4 Qoraalka sawirka hooska
5 Qoraalka Morph
6 Kala-baxa qoraalka qoraalka
7 Animation Wave
8 Qoraalka xiisaha leh
9 Saamaynta qiiqa
10 Saamaynta xumbada
11 Qoraalka buuxinta Animated
12 Qoraal animation ah CSS iyo HTML
13 Sawirka qoraalka midabka
14 Qoraalka xiisaha leh ee SVG
15 Qoraalka hooska
17 Waxyeellada qarxa
18 Saamaynta qoraalka mawjadda
19 Animation GSAP
20 Animation qoraal midab leh
21 Saamaynta qoraalka aan macquul ahayn
22 Qoraalka oo midabbo badan leh ayaa laga buuxinayaa SVG
23 Qoraalka xiisaha leh ee SVG
24 Qoraalka cilad
25 Qoraalka cilad
26 Qoraalka Glitch SCSS
27 Qoraal qoraalka
28 Ku dul dhaqaaq qoraalka si muuqaal ah
29 Qoraalka muujinta xiisaha leh
30 Qoraal farxad leh
31 Qoraal 3D ah oo ka kooban
32 Qoraal CSS saafi ah hooska
33 Hooska qurxoon
34 Hooska labaad
35 Parallax Hooska
Saamaynta qoraalka aamusnaanta filimka
Saameyn qoraal oo gaar ah oo loo soo bandhigay inay tahay mid ku habboon nooc gaar ah oo mawduuc ah. Xigashooyin waa la tusi karaa si loo caddeeyo inaan fiiro gaar ah u leenahay qaabeynta degelkeenna ama tan macmiilka.
Kordhinta gelitaanka qoraalka CSS
Qoraalkan CSS-ka ee aan rasmiga ahayn wuxuu isku dayayaa inuu u kala sooco sidii ay ahayd oo kale furaha sirta ah ee silsilad. Hab aad u cajaa'ib badan oo lagu soo bandhigo qoraal loogu talagalay degel loogu talagalay mowduuc gaar ah.
Qoraalka sawirka hooska
Kala-baxa qoraalka qoraalka
Ku ruxrux animation qoraalka gudahiisa oo leh SVG. Mid ka mid ah qodobbada xiisaha leh ee tan Saamaynta qoraalka waxay ku jirtaa sawirka asalka iyo wejigiisa buuxiya mawjadda si uu si sax ah uga soo baxo.
Qoraalka xiisaha leh
Saamaynta qoraalka jQuery ee ina tusaysa sida loo abuuro saamaynta xumbo ee cinwaanka ah HTML. Saameyntu waa inay ka dhigto goobooyin ka soo baxa qoraalka gadaashiisa sidii inay yihiin biyo dhalaalaya. Aad u soo jiidasho leh.
Qoraalka buuxinta Animated
Qoraal animation ah CSS iyo HTML
Sawirka qoraalka midabka
Halkan qoraalka ayaa lagu sawiray saameyn midab leh oo aad u layaab leh taasna waxay ku siin kartaa qoraalka arrimaha la xiriira qaan-gaarnimada ama dhallinyarada. Ugu dambayntii waa madhan tahay, halka farta lagu dhajiyay codad taxane ah oo firfircoon.
Qoraalka xiisaha leh ee SVG
Hooska qoraalkaani wuxuu soo saarayaa qoto dheer midabyo dhalaalaya oo u eg sidii dukaan la dubo. Naafada kaliya ayaa ah in aan lagu hagaajin aaladaha mobilada.
CSS iyo animation HTML oo isu soo bandhigaysa hal-abuurkeeda iyo qaar midabyo u dhexeeya jaalle iyo casaan. Wixii adeegsi ah oo lagu go'aamiyay gaar ahaaneed ee animation-ka midabadaas oo u dhex maraya sawirka qoraalka.
Saamaynta qoraalka mawjadda
Sida filimo badan, dhammaan xarfaha sameeya cutub ayaa ka soo muuqan doona meel kasta si ay ugu dambeyntii u soosaaraan jumladaha iyagoo saameyn weyn ku leh animation. Aad u jilicsan mid ka mid ah saameynta qoraal indho qabad badan leh oo tayo sare leh oo ku jira liiska oo dhan. Muhiim u ah in maskaxda lagu hayo noocyada qaarkood ee shaqooyinka macaamiisha.
Animation qoraal midab leh
Saamaynta qoraalka aan macquul ahayn
El sanduuqa cas ee ku wareegsan qoraalka Waxay isku rogtaa iyada oo leh hooska hooska oo daboolaya erayga ama oraahda. Waa wax aad u xiiso badan oo xiiso weyn leh in lagu daboolo iridda ama cinwaanka degel websaydh leh xarrago.
Qoraalka oo midabbo badan leh ayaa laga buuxinayaa SVG
Multicolor buuxinta midab oo loo bixiyay sida mid ka mid ah Saamaynta qoraalka soo baxday laftiisa. Waxay ku gaar tahay liiska oo waxay leedahay taabashadaas qarxa ee u sababi doona dareen soo booqdeyaasha websaydhka. Haddii uu garanayo sida loo meeleeyo, wuxuu bixin doonaa qoraalka.
Sidii waddadii isaga loo sii waday ayaa la miiqay dhalaalaya animated sawirka qoraalka SVG. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu xiisaha badan ee liiska ku jira taasna waxaa lagu meeleeyaa meeshiisa si loo aqoonsado nafteeda.
Sida haddii ay jirtay faragelin ku jirtay calaamadda taas sawiri qoraalka ama noolee, Saamaynta qoraalkaani waa dhammaystir weyn. Kali kali ah oo aan shaki ku jirin oo iskeed isu soo bandhigaysa. Lagu sameeyay HTML (pug) iyo CSS (SCSS).
Qoraalka Glitch SCSS
Qoraal kale oo cilad ah oo faragelin ah oo boggaagu ka heli doono degel aad u gaar ah mawduuca, xaqiiqdii la xiriira sheekooyinka sayniska.
Ku dul dhaqaaq qoraalka si muuqaal ah
Markaan dhigno jiir tilmaame qoraalkan, waxay ku dhaqaaqi doontaa aragti aad u xiiso badan oo gudbisa saameynta 3D.
Qoraalka muujinta xiisaha leh
Qoraal farxad leh
Qoraal 3D ah oo ka kooban
Saamayn kale oo 3D ah oo loogu talagalay sameysmaan ereyada kala duwan ee dhammaan xarfaha kaas oo ka soo muuqan doona isku duubnaan ayaa laga soo durkay banaanka ilaa gudaha Natiijo aad u fiican oo muuqaal iyo shineemo leh. Mid kale ayaa lagula taliyay liiska.
Qoraal CSS saafi ah hooska
Qoraalkan wuxuu saameyn ku yeelanayaa CSS saafi ah progaan hooska natiijada weyn iyo qaab fiican. Lama sheegi karo iyo mid kale oo ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan liiska. Animation No, laakiin dhalaalaya.
Saamaynta hooska oo runtii u muuqata mid weyn. Ku habboon bogagga degitaanka ama shabakadaha xanaanada. CSS saafi ah oo gooni u taagan.
Saamayn kale oo weyn oo hoos ah ayaa ku jirta HTML iyo CSS oo taagan kaligeed. Hooska shaxda wuxuu ku abuuraa xarrago websaydhyo mawduucyo gaar ah leh.
Liiska ayaan ku dhamaynaynaa mid ee saameynta ugu quruxda badan ee ku jirta parallax hooska loo tuuray qoraalka. Waxaan u gudbineynaa tilmaamaha jiirka iyo dhanka midig, hadba inta fog ee hooska ayaa ka muuqan doonta. Waxaa qoray Ract, ES6 iyo Babel.
Waxaad haysaa liis kale oo ah saamaynta qoraalka halkan.
Naqshadeynta alaabta guriga oo ka samaysan kartoon
Farqiga u dhexeeya qaabka raadinta iyo Kerning